ဗဟုသုတ ၊ ဆောင်းပါးများ Archives - Online Hartha
ဗဟုသုတ ၊ ဆောင်းပါးများ
ခုခေတ် (၁၅) (၁၆) မိန်းကလေးတချို့ ရိုင်းတာကို ဂေါ်တယ်ထင်နေကြတယ် အပြောအဆိုတွေက ထမိန်ထဲက မထွက်ဘူး
အပြောအဆိုတွေက ထမိန် ထဲကမထွက်ပဲ ရိုင်းတာကို ဂေါ်တယ်ထင်နေကြတဲ့ မိန်းကလေးငယ် တချို့ သိဖို့ ခုခေတ် ၁၅ ၁၆ မိန်းကလေးတချို့ ရိုင်းတာကို ဂေါ်တယ်ထင်နေကြတယ်…အပြောအဆိုတွေက ထမိန် ထဲကမထွက်ဘူး… ကိုယ့်နှုတ်ထွက်စကား ညစ်ညမ်းမှအထာကျတယ်ထင်နေကြတယ်…. အင်္ဂလိပ်စကား ညှပ်သုံးရင်တောင် What the Fuck နဲ့ Fuck You Bitch ပဲပြောတယ်…. ကိုယ့်ကိုယ်ကို တောင် တန်ဖိုးမထားတာ ဘယ်ယောက်ျားကမှလဲ ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားမှာမဟုတ်ဘူး… ! အနား အားပေးတဲ့သူ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်… ဝိုင်းပြီးပင့်ပေးနေတဲ့သူရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်.. ကိုယ်ပေါင်းတဲ့တခြားသူတွေကလဲ အဲ့လို အသုံးအနှုန်းလောက် ကိုအရမ်းဂေါ်တယ်လို့တလွဲတွေးနေတဲ့သူတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်… ဒီလို အောက်လုံးတွေ ပြောနေတဲ့ မိန်းကလေးက အလွယ်ရမယ်ဆိုတာ ယောက်ျားတိုင်း သိတယ်.. ဘာရရ စားမယ် ဆိုတဲ့ကောင်တွေလောက်ပဲ ရလိမ့်မယ် ဒါကို … Read more
အဖေ့ အကောငျ့လေး အရငျလို မီးမစိမျးတော့ပါဘူး
အဖေ့ အကောင့်လေး မီးမစိမ်းတော့ပါ… အဖေ Facebook ဆိုတာကို စ သုံးတော့ကျွန်တော့် အကောင့်ကို စပြီးadd တာအဖေ့နာမည်နဲ့ အဖေ့အကောင့်ကို မြင်တော့ လန့်သွားတယ်။ ငါ့ အဖပေါလား..အံမယ် အဖေက အင်တာနက်တောင် သုံးတတ်လို့ … အဖေက ကျွန်တော့် အကောင့်ကို add ပြီး ကျွန်တော့် ညီမလေး အကောင့်ကိုလည်း ရှာပြီး add တယ်။ သူက မောင်နှမ နှစ်ယောက်စလုံး ဘာတွေတင်ထားလဲ ဘယ်သူနဲ့ ဘာတွေပြောလဲ သိချင်ရုံသာ …. ကျွန်တော်ကတော့ အဖေ့အကောင့်ကို လက်ခံပြီးမှ စဉ်းစားတယ်.. ငါ ပေါက်ကရတွေ လျှောက်တင်လို့အဖေမြင်ရင် အဆူခံရမလားဆိုပြီး သူက ကျွန်တော် အချစ်အကြောင်းတွေ ​​လျှောက်ရင်လဲ ဖတ်တာပဲ ….. ပြီးရင် အမေ့ကို … Read more
တစ်ရွာလုံးပိုက်ဆံကိုင်ခွင့် မရသည့်တံငါရွာ ဒုံးဆွေသန်းကျေးရွာ လူတစ်ဦး၊ မိသားစုတစ်စုတွင်မက တစ်ရွာလုံး ပိုက်ဆံမရှိဘဲ ရပ်တည်နေထိုင်သည့် ရွာတစ်ရွာမှာ တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းရှိနေသည်။ တနင်္သာရီတိုင်း မြိတ်ခရိုင် ကျွန်းစုမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရေမြစ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ယင်းရွာရှိနေသည်။ အမည်က (ဒုံးဆွေသန်းကျေးရွာ) ဒုံးကျွန်းအုပ်စုအတွင်း ဒုံးပုလဲအော် ၊ ဒုံးညောင်မှိုင်း ၊ဒုံးဒဟွန်း စသည့်ကျေးရွာအမည်များရှိကြသည်ကို လူအများကသိကြသည်။ သို့သော်( ဒုံးဆွေသန်းကျေးရွာ) ဟု ရွာလေဆိပ်တွင်ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတင်ထားသော်လည်း သူ့ရွာအမည်ကို လူအများသိပ်မကြားဖူးကြ။ သည်ရွာကို ဦးဆွေသန်းဆိုသူက လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ကျော်ကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် အိမ်ခြေတစ်ရာနီးပါးပင်ရှိလာနေပြီဖြစ်သည်။ ယင်းရွာတွင် လက်ရှိနေထိုင်နေကြသူ တခြားဒေသများမှ လာရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး အခြားဒေသများမှလာရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး အခြေချနေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်။သို့သော် ဦးဆွေသန်းမှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ၄င်းအစား သမီးဖြစ်သူက အဖေ၏ လုပ်ငန်းများအား ဆက်လက်ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်နေသည်။ရွာရှိ ၁၂ နှစ်အရွယ် ယောက်ျားကလေးမှအစ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်သည့် … Read more
၀ိညာဉ်များနှင့် ဆက်သွယ် စကားပြောသူ ဒေါ်အေးအေးမြင့်ရဲ့ ဟောကိန်းတွေက မှန်နေပြီလော…
November 20, 2020 by Online Hartha
၂၀၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉ မှာ သဘာဝဘေးကပ်ဆိုးကြီး ကြုံရဖွယ်မြင်တယ်-၀ိညာဉ်များနဲ့စကားပြောသူ ဒေါ်အေးအေးမြင့်က ဟောကိန်းထုတ် ၂၀၁၅ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ၀ိညာဉ်များနှင့် ဆက်သွယ်စကားပြောသူ ဒေါ်အေးအေးမြင့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကို News Watch မှ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းထံသို့ လူအများယုံကြည်အားကိုး၍ မေးမြန်းသူများရောက်ရှိလာသကဲ့သို့ မယုံကြည်၍ ပညာစမ်းလိုသူများလည်း ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ယင်းအခြေအနေတွင် တရက် လူ ၂၀၀ ကျော် သူမထံ ရောက်ရှိလာ၍ အလွန်အမင်းပင်ပန်းခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းမှ နာမည်ကြီး ထင်ရှားလိုခြင်းအတွက် ပြောခဲ့ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ပြည်တွင်းသတင်းဌာနများ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနအချို့ကပါ ဆက်သွယ်၍ သတင်းဖော်ပြခွင့်တောင်းရာ ခွင့်မပြုခဲ့ပေ။ ယင်းအပြင် လွန်ခဲ့သည့် လအနည်းငယ်ခန့်ကပင် News Watch မှ ဒေါ်အေးအေးမြင့်ထံ ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း အင်တာဗျူးပေးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့ရာမှ ယခု … Read more
ရဟန်းများ မကြွထိုက်သောအိမ် (၉)မျိုး
November 3, 2020 by Online Hartha
ရဟန်းများမကြွထိုက်သောအိမ် (၉)မျိုး ၁။ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ခရီးဦးမကြိုဆိုသော အိမ်၊ ၂။ မြတ်မြတ် နိုးနိုး ရှိမခိုးသော အိမ်၊၊ ၃။ နေရာထိုင်ခင်း မပေးသော အိမ်၊ ၄။ ထင်ရှားရှိသော လှူဖွယ် ဝတ္ထုတို့ကို သိုဝှက်ထားသော အိမ်၊၊ ၅။ လှူဖွယ်အများရှိလျက် အနည်းငယ်မျှသာ လှူသော အိမ်၊ ၆။ မွန်မြတ်သော လှူဖွယ်ဝတ္ထု ရှိပါလျက် မကောင်းသည်ကို လှူသော အိမ်၊၊ ၇။ မရိုမသေ ပေးလှူသော အိမ်၊ ၈။ တရားနာရန် မချဉ်းကပ်သော အိမ်၊၊ ၉။ တရားကို ကောင်းစွာ မနာကြားသော အိမ်။ (အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊၃၊၁၉၂) (မြန်မာ၃၊၁၉၃) Credit. မူရင်းတင်သူ။ ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။ Unicode version ရဟနျးမြားမကွှထိုကျသောအိမျ (၉)မြိုး … Read more
ပုံမှနျဝငျငှရှေိပွီး လကျထဲမှာ ပိုကျဆံ မစုမိသူမြား အတှကျ ပိုကျဆံစုတဲ့ နညျးဗြူဟာ
October 27, 2020 by Online Hartha
ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိပြီး လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ မစုမိသူများ အတွက် ပိုက်ဆံစုတဲ့ နည်းဗျူဟာ ပိုက်ဆံ စုတယ် ဆိုတာ ရည်မှန်းချက် တစ်ခု ထားပြီး ရေရှည် တည်ဆောက် ထားသင့်တဲ့ အလေ့အကျင့် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်… ။ ငွေကြေး အောင်မြင်မှုမှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက် ဝင်တယ် ဆိုတာထက် ဘယ်လောက် စုနိုင်တယ် ဆိုတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်… ။လူတွေက မဝင်သေးတဲ့ ပိုက်ဆံကို မျှော်ကိုးပြီး အကြွေး ယူတတ်ကြတယ်… ။ ဒါက အဓိက မှားယွင်းနေတဲ့ အချက်ပဲ… ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ပိုက်ဆံစုနေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လို ဗျူဟာတွေ သုံးရမလဲဆိုတာ အချက်ကျကျ တင်ပြချင်ပါတယ်. . . ။ ၁။ သုံးပြီးမှ မစုလေနဲ့… လစာထုတ်တာနဲ့ … Read more